Himalaya Dainik » अाहा ! तिलिचो ताल : कसरी जाने घुम्न ? शेयर गरेर प्रचार गरौँ
अाहा ! तिलिचो ताल : कसरी जाने घुम्न ? शेयर गरेर प्रचार गरौँ
तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि चार हजार नौ सय १९ मिटर उचाइमा अवस्थित छ । ताल वरिपरि मुक्तिनाथ, तिलिचो हिमाल, नीलगिरि हिमशृंखलाले ताललाई मनमोहक र आकर्षक बनाएको छ ।
तिलिचो ताल माथिल्लो मनाङबाट करिब ४५ किमी दूरीमा पर्छ । काठमाण्डौबाट लमजुङको बेँसीशहर हुँदै मनाङको खाङसारसम्म गाडीमा जान सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति १ मंसिर २०७५, शनिबार १५:५२